Welcome to Aayaha Nolosha » Isma lahayn Jacayl noocaan ah baa qalbigaaga ku beermi doona.
Isma lahayn Jacayl noocaan ah baa qalbigaaga ku beermi doona.
March 13, 2018 - Waxaa Qorey : Bile Mohamed -
Mudo badan ma aan ku fikireyn jacayl xad dhaaf ah baa buuxin doono qalbigaaga, mudo gaaban ka hor kuma aan tashaneyn in xiiso jacayl ila sari tagi doono welibana intuu samada ila tagay ayuu hada dhulkii ii diiday.
Marwadaan jeclaaday waxay i tustay qadarin jacayl iyo ka run sheegida nafta taasina waa waxaan ku jeclaaday, erey been ah iskaba daayee eray aan necbeysto weligeed imeeysan oran, waxay i bartay macnaha jacaylka, waxay i bartay macaanka nolosha, waxaan u dhiibtay furaha qalbigeyga ayadana waxay ii dhiibatay furaha qalbigeeda, labadii furo ayagoon wax copy ah laga bixin ayaan badweynta ku tuurnay.
Ma aamineysaa qofka aan dhex dejiyay wadnaheyga waa qof aad iiga fog waxa inoo dhaxeeyo DHUL, BAD, Iyo BUURO, sidaa ay tahayna waxaan ku dhex asteeyay xinjiraha wadnaheyga, halkii maalin ee aan la xiriirin waxaan dareemaa Cabsi iyo welwel aad u culus, jacaylka aan u qabo wuxuu i gaarsiiyay heer aan saacad walbo aan doonayo in aan lasocdo xaaladeeda.
Habeen walbo waxaan ku dhafraaa inaan fadhiisto laamiga dhinaciisa jardiin ku yaalo anigoo daawanayo Dayaxa iyo siduu caadka u guurguurayo isla saacadaasna niyada ku haayo siduu mustaqbalkeyga iyo qoftaan jeclaaday u heli lahaa.
Qof weliba wuxuu ku hami weynyahay inuu calfado marwo kasoo bixi karto booska raaliyinimada, marwo welibana waxay jeceshahay in ay calfato nin kasoo bixi karo masuuliyada qoyska, runtii aniga waxaad moodaa inaan helay caruurtooda hooyadood, jacaylka igu beermay waa mid aan xamili kari waayay mararka qaar igaarsiiyo heer aan joojiyo wax walbo oo aan qabanayo, Jaceylku maahan shay cayaar galo, waa arrin ku haboon ka run sheegida, ka ilaalinta beenta iyo in loo haayo qadarin dhab ah, si loogu noolaado nolol mida ugu macaaan,
Xusuustu waa mid kulul, xiisuhuna waa joogto, hamiguna waa kan igu fiday, riyaduna waa habeen walbo, calafkuna waa halkiisa, jaceylkuna waa kan ihaayo.